Kisary bokotra (SPY031) | Vahaolana OMG
MINI SPY CAMERA: namboamboarina toy ny bokotra, misy fakantsary misy rindrina ao anatiny, ity camera mpitsikilo ity dia ahafahanao manoratra horonam-peo sy lahatsary tsy misy olona mahatsikaritra izany. Io fitaovana kely io dia hanova ny fiainanao. Ampiasao izany mba hanitarana ny fahatsiarovanao, hahazoana hevitra lehibe sy resaka, fifanakalozan-dresaka, fifanarahana ara-barotra amin'ny teny sy ny rakitsoratra hafa rehetra tokony hotandremanao.
HIDDEN CAMERA HO AN'NY HOME: Ny fakan-tsary miafina miafina tsara indrindra no fakan-tsary miafina tsara indrindra. Ity rakitsary miafina miavaka miafina ity dia tena loko voajanahary tanteraka amin'ny horonantsary miharo feo ary maka sary sary raha ilaina.
FAMPIANARANA MEMORY: Ny fakan-tsarimihetsika amin'ny webcam, fanohanana ny SDN micro SD SD amin'ny max, ity fakantsary ity dia tena sangan'asa matihanina, mendrika ho an'ny mpitsikilo manokana.
EASY IREO MAMPIASAINA AO AMIN'NY PC na MAC: Makà fotoana any am-piasana, vady, namana na ankizy na dia tsy eo aza ianao! ny kitapo miafina fanohanana endrika format ho an'ny PC & mac USB.
FANAMARIHANA: Ny alàlan'ny baoritra fandefosana avo lenta dia ahafahana mandefa haingana sy mihetsika be indrindra. manoritra ny lahatsarinao sy ny sary miaraka amin'ny endriky ny daty sy fotoana.
→ Moa ve ianao mpitoraka bilaogy vaovao mavitrika, mpanao gazetim-bahoaka, mpanao fanadihadiana na mpilalao horonan-tsary mampihomehy fotsiny? Te-hitazona rakitsary audio / horonan-tsary momba ireo fivoriana tsy miankina ireo mandritra ny fiverenana any aoriana
→ Ity Camcorder Spyder 8 GB ity dia ahafahanao manoratra fanadinadinana, fivarotana fivarotana, lahateny amin'ny sekoly ary fifanakalozan-kevitra an-tserasera nefa tsy mampiahiahy na iza na iza.
→ Ity dia iray amin'ireo mpilalao horonantsary mafana indrindra hatrizay! Gadget elektronika maivana sy malefaka izy io. Izany dia mahomby amin'ny fitehirizana sy fitazonana azy eny an-tokotany na any an-trano.
Automatique ny fanitsiana balamanana fotsy
Maka sary sary: Eny
Sary: 1280 X 1024
mikrô: fananganana (Famerenan-kirakira ny fahitalavitra audio sy video)
Fiatrehana latsakemboka: DC-5V
Ny karazana interface: mini 5-pin USB
USB Port: Standard Port 1.1 / 2.0 USB
Battery: Built-in lithium battery 180mAh
Fotoana fiasana: Ora 1.5 ho an'ny horonantsary fanoratana
Rafitra fanohanana: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10; Mac OS; Linux;
Memory: Natao ny 4GB / 8GB / 16GB / 32GB
Package dia ahitana:
Fanamarihana: Ny karatra memiliana 8GB dia misy.
2.1 X 0.5 X 0.5 santimetatra
Button Camera (SPY031) no farany niova: Oktobra 9th, 2019 by Admin
7279 Total Views 1 Views Today